November 14, 2021 - Babal Khabar
Nov142021 by बबाल खबरNo Comments
यो भिडियो हेर्नुस, गर्मी मौसममा लामखुट्टेले टोकेर हैरान बनाउँछ । तर हामी मध्ये कतिपय यस्ता छौ जसलाई अन्यको तुलनामा लामखुट्टेले धेरै टोक्छ । तर किन त लामखुट्टेमा मानिस र जनावर भएको ठाउँ थाहा पाउने एक विशेष प्रकारको सेन्सर हुन्छ । यसैको मद्दतले यसले शिकारलाई खोज्दछ। यस अलावा अन्यको तुलनामा कसैलाई बढि लामखुट्टेले टोक्छ भने लामखुट्टेलाई के कुराले आकर्षित गर्छ त ? यी हुन् कारणः धेरै पसिना आउने मानिस प्रति लामखुट्टेलाई आकर्षित गर्दछ। लामखुट्टेलाई आवश्यक पर्ने सबैकुरा पसिनामा पाइन्छ। त्यसैले यो आर्कषित बन्दछ। महिलाको तुलनामा पुरुष र बच्चालाई र यी दुइको तुलनामा पनि वयस्कलाई लामखुट्टेले धेरै टोक्ने गर्दछ। लामखुट्टे शरीरको तापक्रममार्फत आफ्नो शिकारको खोजी गर्दछ। मानिसको शरीरको तापक्रम लामखुट्टेका लागि आइडियल हुने गर्दछ। कालो, निलो, रातो जस्तो गाढा रङको कपडामा लामखुट्टे आकर्षित हुने गर
अनिष्ट हुन्छ ,संकट आइलाग्छ: खाट, पलंग मुनी राख्नु हुँदैन यी वस्तु !
हेर्नुस यो भिडियो, हाम्रा घरमा रहेका खाट वा पलंङ मुनी विभिन्न राख्ने गरिन्छ। यसरी खाट वा पलंङ मुनि कुनै वस्तु राख्नु अघि केहि कुराहरुमा ध्यान पुर्याउन आवश्यक हुन्छ। केही यस्ता वस्तुहरु छन् जुन हाम्रो खुट्टा वा पलंङ मुनि राख्न नहुने कुरा वस्तु शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ।यी वस्तुहरु सुत्ने कोठा भित्र राख्दा समेत विभिन्न वस्तु दोष हुने भएकाले निन्द्रा नलाग्ने र अन्य धेरै स्वास्थ्य समस्याहरु निम्तिन सक्छन। आज हामी तपाईहरुलाई आफू सुत्ने खाट वा पलंङमुनि राख्न नहुने वस्तुहरुको बारेमा जानकारी दिन जाँदै छौँ जसले विभिन्न दोषको प्रकोपबाट छुटकारा दिलाउने गर्छ। आफू सुत्ने पलङमुनी झुक्केर पनि वजनदार वस्तु राख्नु हुँदैन। यसो गर्दा फोहोर मात्र हुने नभएर तपाईलाई निकै तनाब दिने गर्छ। धातु सहित खिया लाग्ने चिजहरु समेत आफ्नो खाट मुनि राख्नु हुँदैन। वस्तु शास्त्र सकारात्मक र नकारात्मक उर्जाको सिद
भिडियो हेर्नुस, ज्योतिष विद्या यस्तो विद्या हो जसले केहि न केहि तरिकाबाट मानिसको भविष्य बताउँछ । पछिल्लो समयमा यो विद्या प्रमाणित पनि भइसकेको छ। विभिन्न तरिकामध्ये ज्योतिष विद्याको एक तरिका हो हस्त रेखा । यहि रेखाको माध्यमबाट ज्योतिषले तपाईको आफ्नो जीवनको बारेमा धेरै कुरा बताउँछन्। हस्थरेखाको अनुसार पुरुषको दायाँ हात र महिलाको बायाँ हातको रेखा हेर्ने गरिन्छ । हरेक व्यक्तिको हत्केलामा विभिन्न प्रकारका हस्तरेखाहरु हुन्छन्। आज हामी तपाईलाई हत्केलामा भएको यस्तै एउटा रेखाको बारेमा बताउँन गइरहेका छौ। के हो हस्तरेखा ? हस्तरेखा शास्त्रको प्राचिन ज्ञानको आधारमा हत्केलाको रेखा मानिसको व्यक्तित्व र भविष्यको सम्भावना जस्तै करियर , जीवन , विवाह, धन र स्वास्थ्यसम्वन्धी विभिन्न कुराहरु बताउँछ। हातको रेखा हेरेर भविष्यको अनुमान लगाउन सकिने हजार वर्ष पहिलेनै हिन्दू ऋषि बाल्मीकिले ५६७ छन्द युक
यस्ता राशी भएका पुरुषले पाउछने सुन्दर श्रीमती !
हेर्नुस यो भिडियो, हरेक व्यक्तिका आ-आफ्नै चाहना हुन्छन्। त्यस्ता चाहनाहरु समय–समयमा प्रकट पनि हुन्छन् । प्राय: हरेक पुरुषको एउटा समान चाहना हुन्छ, सुन्दर श्रीमती पाउनु।तर यो त जरुरी छैन कि सबैको यो चाहना पूरा होस्। यसमा केही हदसम्म हाम्रो भाग्यले पनि प्रभाव पार्छ। अर्थात राशिअनुसार पनि पुरुषले सुन्दर महिला पाउने विषय शास्त्रमा उल्लेख गरेको पाइन्छ।तुला राशि सुन्दर श्रीमती पाउनुलाई भाग्यसँग जोडिन्छ। र त्यसआधारमा तुला राशि भएका व्यक्ति सबैभन्दा भाग्यमानी मानिन्छन्। तुला राशि भएका व्यक्ति धेरै इमोशनल र समझदार हुन्छन्। यस्ता राशि भएका व्यक्तिको प्रमुख विशेषता हो कि यीनिहरु आफ्नो पार्टनरसँग गहिरो सम्बन्ध स्थापित गर्न सफल हुन्छन्। कन्या राशि कन्या राशि भएका पुरुष धेरै सुन्दर हुने विश्वास छ। यस्तो राशि भएका व्यक्ति कुरा गर्नमा पनि सिपालु हुन्छन् । कन्या राशि भएका व्यक्तिमा खास गरेर
अण्डाको कुन भाग खादा स्वास्थ्यकोे लागी बढी फाइदा, जान्नुहोस् !
हेर्नुस भिडियो, काठमाडौँ- अण्डा हाम्रो स्वास्थ्यको लागी निकै फाइदाजनक छ । प्रोटिन, भिटामिन लगायत बिभिन्न खनिज पदार्थ पाइने अण्डाले हामिले नसोचेको फाइदा गर्छ । एउटा सिङ्गै अण्डामा पाइने आधाभन्दा बढी प्रोटिन यसको सेतो भागमा पाइन्छ । अण्डाको सेतो भागमा सेलेनियम, भिटामिन ’डी’, भिटामिन ’बी ६’, भिटामिन ’बी १२’, जिंक, आइरन पाइन्छ भने पहेलो भागमा भिटामिन ’बी ६’, ’बी १२’, ’ए’, ’डि’, ’इ’ र ’के’ का साथै क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, आइरन पाइन्छ । अण्डा खादा अण्डाको कुन भाग खादा बढि फाइदाजनक हुन्छ भन्ने प्रश्न आउन सक्छ । तर अण्डाको पहेलो वा सेतो जुन भाग खादा पनि स्वास्थ्यको लागी भने यतिनै फाइदाजनक छ । शरीरमा कुन तत्वको मात्रामा कमि भएको छ त्यो हेरेर नै अण्डाको कुन भाग खादा राम्रो हन्छ छुट्टाउन सकिन्छ । अण्डाको पहेलो भागमा ९३ प्रतिशत आइरन हुन्छ भने बाँकी रहेको ७ प्रतिशत मात्र सेतो भागमा हुन्छ ।
ओठबाट थाहा हुन्छ, युवतीको यौ’न क्षमता !
हेर्नुस यो भिडियो, ओठले महिलाको सौन्दर्य सँगै उनीहरुको यौ’न व्यव’हार वा चाल चलनका विषयमा समेत बुझाउँछ । शरी’रका हरेक अंगहरु हाम्रा अन्य अंगहरु कुनै न कुनै हिसाबले अन्र्त सम्बन्धित नै रहेका हुन्छन् । जस्तो की नाभी नाइटो र मानव स्वास्थ्यका बीचमा ग'हिरो सम्बन्ध रहेजस्तै महिलाको ओठले उनीहरुको यौ’न व्यहा’रसँग सम्बन्ध राख्दछ । स्टकल्याण्डमा गरिएको अध्ययन अनुसार थेप्चो ओठ हुनेभन्दा माथिल्लो ओठ बिचमा केही अग्लो र थोरै चुच्चो भएका महिला यौ’नसम्प’र्कका बेला छिटो चरमो'त्क'र्षमा पुग्ने तथ्य पत्ता लागेको छ । महिलाको ओठको प्रकार यो’नी, पाठेघर तथा अरु यौ’नां'गको सं'वे'दनशी लतासँग सम्बन्धित हुने अ'नुसन्धा'नकर्ताहरु बताउँछन् ।त्यसैले अग्लो र पुष्ट ओठ हुने महिलामा च'रमो'त्कर्षमा पुग्ने गति थेप्चो' आकारका ओ'ठ हुनेमा भन्दा १२ गुणा बढि हुने ठ'हर उनीहरुले गरेका छन् । एजेन्सी यो पनि पढ्नुहोस : सुत